Kuyini Ukuguquguquka? - Cazoo
Ikhaya » Ikhaya » Kuyini Ukuguquguquka?
Tag: bitcoin, I-BVOL, ethereum, Litecoin, Ukungazinzi
Kwezezimali, ukungazinzi kuchaza ukuthi intengo yempahla ishintsha ngokushesha kangakanani nokuthi malini. Imvamisa ibalwa ngokuya nge- ukuphambuka okujwayelekile imbuyiselo yonyaka yempahla esikhathini esibekiwe. Ngoba kuyisilinganiso sejubane nezinga lokushintshwa kwamanani, ukungazethembi kuvame ukusetshenziswa njengesilinganiso esisebenzayo sengozi yokutshalwa kwemali kunoma iyiphi impahla.
Ukungazinzi ezimakethe zendabuko
Ukuguquguquka kukhulunywa kakhulu ngakho emakethe yamasheya, futhi ngenxa yokubaluleka kwako ekuhloleni ubungozi, kunezinhlelo ezisunguliwe ezimakethe zendabuko (ezibizwa ngokuthi izinkomba zokuguquguquka) ukukala kanye nokulindela amazinga okuguquguquka kwesikhathi esizayo. Isibonelo, i-Chicago Board Options Exchange's Volatility Index (VIX) isetshenziswa emakethe yamasheya yase-US. Inkomba ye-VIX isebenzisa amanani entengo we-S & P 500 wokulinganisa ukuguquguquka kwemakethe ngaphezulu kwewindi lezinsuku ezingama-30.
Yize ikakhulu kuhlotshaniswa namasheya, ukungazinzi nakho kubalulekile kwezinye izimakethe zendabuko. Ngo-2014, i-CBOE yethule inkomba entsha yokuguquguquka kweminyango engu-10 yaseMelika yaseMelika ekala ukuzethemba kwabatshalizimali nobungozi emakethe yezibopho. Yize kunamathuluzi ambalwa okulinganisa, ukungazethembi nakho kuyisici esibucayi sokuhlola amathuba emakethe yezimali zangaphandle.
Ukungazinzi ezimakethe ze-cryptocurrency
Njengakwezinye izimakethe, ukuguquguquka kuyindlela ebalulekile yobungozi ezimakethe ze-cryptocurrency.
Ngenxa yemvelo yabo yedijithali, izinga labo eliphansi lokulawulwa (i-Holy Decentralization) nosayizi omncane wemakethe, ama-cryptocurrensets aguquguquka kakhulu kunamanye amakilasi amaningi wefa.
Leli zinga eliphakeme lokuntengantenga ngokwengxenye linomthelela ekubhebhethekiseni inzalo enkulu kutshalo-mali lwe-cryptocurrency, njengoba livumele abanye abatshalizimali ukuthi babone inzuzo enkulu esikhathini esifushane. Ukungazinzi ezimakethe ze-cryptocurrency kungenzeka kwehle esikhathini eside ngenxa yokwamukelwa okubanzi kwemakethe nokukhula kanye nomthethonqubo owengeziwe.
Njengoba izimakethe ze-cryptocurrency sezikhulile ngokwengeziwe, abatshalizimali sebenentshisekelo ekulinganiseni ukungazinzi kwabo. Ngalesi sizathu, izinkomba zokuguquguquka kwezimo manje sezikhona kwezinye zezinto ezinkulu ezifihliwe. Okuphawuleka kakhulu yi-Bitcoin Volatility Index (BVOL), kepha kunezinkomba ezifanayo zokuguquguquka ukulandelela ezinye izimakethe ze-cryptocurrency, kufaka phakathi i-Ethereum neLitecoin.
Isihloko sangaphambiliniKuyini ukuqhuma emhlabeni we-Cryptocurrencies?
Isihloko esilandelayoYini i-Ethereum?
Yini iSwan Swan? Sichaza umcimbi we-Black Swan.
Yini inethiwekhi ethembekile, ngaphandle kwesidingo sokwethenjwa